एसएसबीको प्रोपोगाण्डा : भारतमा कोरोना फैलाउन नेपालमा षड्यन्त्र ! – कमल खबर
गृह/अन्तरास्ट्रिय/एसएसबीको प्रोपोगाण्डा : भारतमा कोरोना फैलाउन नेपालमा षड्यन्त्र !
२८ चैत, काठमाडौं । ‘बहुत बडी खबर’ भन्दै आज केही भारतीय टिभी च्यानलले नेपालसँग जोडिएको एउटा विवादास्पद समाचार प्रशारण गरिरहेका छन् । नेपालको बोर्डरमार्फत भारतमा कोलोना फैलाउने भीषण षडयन्त्र भएको ‘सनसनीपूर्ण खुलासा’ उक्त समाचारमा गरिएको छ ।
पर्साको जगरनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाँ हुन् । उनी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए । मधेसी समुदायमा गाउँका अगुवालाई मुखिया भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । त्यसैले एसएसबीले ईंगित गरेका व्यक्ति उनै अध्यक्ष जालिम मियाँ नै भएको अनुमान गरिएको छ ।
भारतीय मिडियाले आफ्नो तस्वीर राख्दै समाचार प्रशारण गरेपछि मियाँले फेसबुकबाट संक्षिप्त प्रष्टीकरण दिएका छन् । त्यसमा उनले भनेका छन्, ‘(भारतसँग) हाम्रो मित्रताको सम्बन्ध छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । जालिम मियाँले यस्तो षड्यन्त्र गर्ने कारण के छ ? चाइनामा जालिम मियाँले कोरोना फैलाएको हो ? अमेरिका, फ्रान्स, इटली सारा देशमा जालिम मियाँले फैलाएको हो ? यो संकटको समयमा केही राजनीतिक व्यक्तिबाट मेरो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको छ । कि ममाथि लागेको आरोप प्रमाणित गरियोस्, सजाय भोग्न तयार छु । होइन भने ममाथि षड्यन्त्र गर्नेहरुलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारसँग माग गर्छु। यस विषयमा मैले गृह मन्त्रालयलाई एसएमएस पठाएको छु । जिल्लाका सीडीओसँग पनि समन्वय गर्नेछु ।’
जगरनाथपुर गाउँपालिकाले आजै एउटा विज्ञप्ति जारी गरी भारतीय मिडियामा प्रशारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अमितकुमार गिरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै तथ्य–प्रमाणविना नेपाली नागरिकको चरित्र हत्या गरिएको भन्दै यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय दूतावाससँग खेद प्रकट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
पर्साका प्रहरी प्रमुख एसपी गंगा पन्त यसो भन्छिन्,
‘अहिले नेपाल र भारत दुबै देशमा पूर्ण लकडाउन छ । भारतपट्टि अझै बढी कडाई छ किनकी उनीहरुसँग एसएसबी धेरै संख्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा कसैलाई लुकिछिपी नेपालबाट सीमा पार गराउन सम्भव नै छैन । एसएसबीले छिर्न दिन्छन् र ? त्यसैले यो आधारहीन कुरा हो । जिल्लामा हामीले लकडाउन कडाईका साथ पालना गराइरहेका छौँ। यसका लागि हामीलाई कसैको पत्र आउनै पर्दैन । हामी सतर्क नै छौँ । जिल्लाका सबै गाउँपालिकासँग निकट रहेर काम गरिरहेका छौँ ।’
पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेत यसो भन्छन् :
एक सय ८९ भारतीय पर्साको क्वारेन्टाइनमा
गत १८/१९ गते करिब पाँच सयको संख्यामा भारतीयहरु रक्सौलतर्फ जान आएका थिए । तर, लकडाउनले रोकिए । उनीहरुमध्ये एक सय ८९ जना भारतीयलाई पर्सा जिल्ला प्रशासनले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । बाँकी चाहिँ नजिकै रहेका आफ्ना आफन्तकहाँ गएको सहायक सीडीओ बस्नेतले जानकारी दिए । यसरी रोकिएकाहरु मुसलमान मात्र होइनन् । प्राय ज्याला-मजदुरी गर्नेहरु छन् ।
कोभिड–१९ रोकथामका लागि प्रदेश १ सरकारको शुक्रबारको सक्रियता